Shwe Sar – Page 588 – Daily News
နာနတ်သီး စားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
နာနတ်သီးစားရင် သူ့မှာပါဝင်တဲ့ ဘရိုမယ်လိန်း (Bromelain) ကြောင့် အရောင်ကျစေတဲ့အာနိသင်ကို ရရှိစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရောင်ရမ်းမှုမှန်သမျှ လျော့နည်းေ စပါ တယ်။ ဥပမာ အရိုးတွေရောင်တာ (Arthritis)၊ ကြွက်သားတွေရောင်တာ၊ ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းတာ (Muscle spasms)၊ […]
ဒီ အိမ်မက်တွေ မက် တတ် ရင် သိမ်းထား ပါ (က) မှ (မ) အထိ
(က) မှ (မ) ထိ [ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့ […]
ည အိပ် မ ပျော် လျှင်
၁. ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်စားပါအိပ်စက်ခြင်းတွက် အထူးကောင်းမွန်းပြီး အားရှိသည်။ ၂. နွားနို့သောက်ခြင်းက အရိုးအဆစ်သန်မာသည့်အပြင် အိပ်စက်ခြင်းကို မြန်ဆန်စေပါသည် ။ ၃. ကြက်သွန်ဖြူခေါင်းအုံးအောက်၃တက်ထားအိပ်ပါ ။ဦးနှောက်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အိပ်စက်မှုကို မြန်ဆန်စေသည် ။ ၄. […]